'Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo' Abalinganiswa, baKhethwe ngabona bantu baninzi banokufa - Iimuvi
'Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo' Abalinganiswa, baKhethwe ngabona bantu baninzi banokufa
Phakathi kwalo lonke ulonwabo olungqongileyo Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo -Ukuqala kwesiphelo seminyaka elishumi yokwakha umhlaba kwi-Marvel Cinematic Universe ethi ekugqibeleni ivumele amaqhawe anje nge-Iron Man kunye ne-Star-Lord ukuba bathengise ii-liners ngelixa i-shirt engenamikhono uDave Bautista ejonge ngaphandle-kukho uloyiko olukhulu. Uninzi lwazo luwela kubukho obungenakuphikiswa bukaThanos (Josh Brolin), umphambukeli omfusa omde ofuna ukutshabalalisa isiqingatha sendalo iphela ngamandla amatye angapheliyo ... ngenxa yezizathu ezingacacanga. (Ndicinga ukuba xa unamandla ngokwaneleyo okutshabalalisa impucuko yonke, uphelelwa zizinto ukuze uzigcine wonwabile.)
Ngelixa i-MCU ibithandabuza kakhulu ukubulala naliphi na lamagorha, Imfazwe engapheliyo Iziteyki eziphakamileyo — kunye ukukhohlela ] inyani Izivumelwano zabanye abadlali abakhulu be-franchise Sele zizakuphela-yenza kucace ukuba ayinguye wonke umntu oza kusinda kwidabi elingaziwayo. Zinjalo nje ezi zinto zihamba: uHan Solo wadibana nesiphelo sakhe Umkhosi uyavusa ; IBoromir kwi INkosi yeeRingi ; URachel (RACHAAAAAL!) Kwi UKumnyama Knight ; kwaye nangokunjalo.
Kodwa leliphi ixesha elinokuthi liphele ukuphela kwe Imfazwe engapheliyo ? Sibeke amaqhawe ama-10 ekunokwenzeka ukuba afe, ngokusekwe kwisigqibo sokutsala, imikhondo evela kwinqwelwana yakutshanje eye yalahlwa ngoLwesihlanu, kunye ne-vibe ngokubanzi ejikeleze abalinganiswa abathile abaya kukhutshwa kwe-27 ka-Epreli. Masiqale ngomgqatswa omncinci, kwaye ukusuka apho.
10. Hayi uShuri
Oku kuncinci kuqikelelo kunye nesicelo esingaphezulu: I-Shuri yenye yezona ndawo zibalaseleyo ze I-Panther emnyama , kunye nezakhono zakhe zobuchwephesha zodwa zibeka uTony Stark ehlazweni. UShuri ngoyena mntu ungathandabuzekiyo kwi-MCU-jonga nje indlela onwabe ngayo mhlawumbi esenza into eza kumisa i-Thanos kwisithuba esingaphantsi kwemizuzu emihlanu!
indawo ethe cwaka kwimidlalo yeqonga
Nika le nkosazana yaseWakandan zonke ii-liners ezilungileyo, mayilungise inkwenkwe emhlophe okanye ezimbini ezaphukileyo, kwaye ungaze usigezele ngokubeka ubomi bayo emngciphekweni. Ewe? Kulungile.
9. Ugqirha Strange
Ungandibuzi ukuba njani, kodwa kwakutshanje Imfazwe engapheliyo Itreyila uGqirha Strange urhintyelwe ngumzala okhohlakeleyo weNkosi uVoldemort!
Ukuba i-acupuncturist ifumana mbi Uphengululo lweYelp. Nangona kunjalo, kusenokwenzeka ukuba uza kwaziwa njengoGqirha Ophilayo, kuba uMarvel usazisa nje kuphela kumandla akhe e-psychedelic.
8. Iimbiza zePepper
UPepper Potts uya kuzama ukuqiqa noThanos malunga nokumangalisa izibonelelo zempilo zokulunywa ziinyosi , kwaye uya kuyitshabalalisa kwangoko athi, Kubonakala ngathi yintsimbi exabiso likhulu. (Bonke abanye abaphindezeli baya kuthi cwaka ukuvuma.)
I-Poor Thor: Ulahlekelwe nje liliso UTr: Ragnarok kwaye ngoku uThanos usebenzisa intloko yakhe njengebhasikithi.
Mhlawumbi ii-Advils ezimbalwa ziya kwenza iqhinga, kodwa sesona sikhundla sinobungozi esikubonile kulo naliphi na lamagorha Imfazwe engapheliyo imifanekiso. Njengaye, nokuba i-Iron Man knockout punch ayikhangeleki ibuhlungu.
Ewe, ukufa kukaThor ngokuqinisekileyo kuncinci kunamanye amaqhawe 'kuba uMarvel ekugqibeleni wenza i-Thor movie efanelekileyo, kwaye kuya kuba yinkcitho ukumbulala ngokukhawuleza emva koko. Yima nzu! Iintloko azikuthandi ukutyunyuzwa!
Lo mfo uzisa isaphetha kunye notolo ekulweni ne-Thanos. RIP, siyaluthanda usapho lwakho ehlathini.
Ivakala ngathi i-MCU iye yaqaqamba ngaphezulu koku, kodwa uNebula noGamora ziintombi ezamkelweyo zikaThanos! Khawufane ucinge ukukhuliswa ngumfana onwabileyo kuphela xa etshabalalisa izinto nge-24/7. UNebula uthetha kancinci malunga noku Abagcini beVol. 2 ; indlela awayeqhele ukumnyanzela ngayo uGamora ukuba alwe, kwaye xa uNebula ephulukene, wayeza kuwucutha umzimba wakhe, nto leyo eyamenza ukuba acaphuke uGamora.
Oko kukuthi… kubi kakhulu! UNebula waba ligorha leentlobo ngokuphela Abagcini 2 . Idini elilungileyo-mhlawumbi lokusindisa uGamora-linokuba semakhadini.
Ngaba uLoki ligorha okanye umguvela Imfazwe engapheliyo ? Akucaci ncam, kodwa nantsi into endiyichazayo: Udibana noThanos, kodwa xa ubona, umntakwabo uThor uphantse wabulawa ngokutyunyuzwa ngamakrele, unotshintsho olukhulu lwentliziyo. Yimizamo enobukroti eyaneleyo yokumisa i-Thanos, kodwa ngandlela thile uyafa kwinkqubo.
Ubuncinci, kude kube phakathi kwendawo yekhredithi… xa etyhilwa ukuba uyaphila, uzenza mntu wumbi, kwi Umhlaba oMnyama .
3. UKapteni Melika
Ayikuko ukuba ndiyakhalaza, kodwa uKaputeni Merika ngekhe akwenze oku kude ukuba Udabi lasekuhlaleni wayehlala enyanisekile kwiihlaya . Kodwa ukusinda kwakhe kusisikelele ngombono ka-Bearded uChris Evans, owamkelekileyo kakhulu kwaye osenokwenzeka ukuba ubangele ukutshintsha kwenyikima kwiChris Wars eqhubekayo. Nokuba i-elite-goatee-haver Thanos ifana, Wow, ilungile intshebe apho.
Nangona kunjalo, ukuya kuzwane ngeenzwane kunye neThanos kupela ingxaki. I-Captain America-i-icon yelinye ixesha, ebambeke kweli xesha lethu, kwaye intle ngaphandle kokukholelwa-lelona gorha libuhlungu elizimisele ukunikela ngobomi balo ngenxa yoluntu lonke uhlobo lwesimilo. Yena watsibela kwiziqhushumbisi kwimizuzu engama-30 yokuqala UCaptain America: uMphindezeli wokuqala -Umfana wam unayo sele ukulungele ukufa.
Andifuni ukuthatha kude kuyo yonke le nto ukuhanjiswa okufanelekileyo Ye-A.I. UPaul Bettany no-Elizabeth Olsen, kodwa uMbono awukho kudala kwihlabathi le-MCU. I-Thanos ifuna amatye angapheliyo; Umbono ngokwenyani kukudityaniswa kweJony's J.A.R.V.I.S. inkqubo yekhompyuter kunye nelitye lengqondo. Ngokuqinisekileyo uThanos uza kubamba ilitye lengqondo, eliza kuthi, licime uMbono.
(Yinto efanelekileyo, siyakubona oko kusenzeka kwinqwelwana yokuqala, nayo.)
1. UTony Stark / Indoda yentsimbi
Ndiyathemba ukuba bayakukhumbula, u-Thanos uxelele uTony Stark kwi-trailer yamva nje, ethi, ngokudityaniswa nokuzikhupha awakufumana kwi-Thanos okokuqala Iimfazwe ezingapheliyo I-trailer, ludibaniso oluhle olukhathazayo lokufanekisela kwangaphambili.
I-MCU iqale nge Indoda yentsimbi Iminyaka eli-10 eyadlulayo, ngexesha apho kwakungacaci gca bhanya-bhanya ye-superhero yayiya kuba yinkulu-kufanelekile ukuba uRobert Downey Jr. afumane i-sendoff yeqhawe elirhuqayo avumele iklasi entsha yamagorha eMarvel (Black Panther, Spider- Indoda, uCaptain Marvel) iyachuma. Kwakhona, uDowney Jr. uneminyaka engama-52 ngoku-kuya kufuneka adinwe, kwaye alungele ukuba isimilo sakhe sife.
U-tessa kunye ne-scott tv show
abadlali abangama-20 abaphezulu
igumbi elivela ekukhanyeni
Ibhili yekati donald ixilongo